05/25/13 ~ Myanmar Forward
"ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာမိန်းခလေးများ မမှားသင့်တာလေးတွေ မမှားရအောင် (ဖြစ်ရပ်မှန်)"
Posted by drmyochit Saturday, May 25, 2013, under ဆောင်းပါး | 1 comment
ဒီအဖြစ် အပျက်လေးက အညာမြို့လေး တစ်မြို့မှာ တကယ်ဖြစ်ပျက် ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ပုဒ်ဖြစ် ပါတယ်။ တိတိကျကျ ပြောရရင် မုံရွာမြို့နယ်၊ အလုံမြို့လေးမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီမြို့လေးဟာ ဘိုးတော်ဘုရား အိမ်နိမ့်စံဘ၀က ပဒုံဟူသောအမည်နဲ့ မြို့တည်ပြီး စိုးစံခဲ့ တာကြောင့် သမိုင်းကြောင်း အရာလည်း ထင်ရှား ခဲ့ပါတယ်။ အလုံမြို့လေးဟာ ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်း နဖူးမှာ တည်ရှိ နေတာကြောင့်လည်း သာယာ စိုပြေ လှပါ သည်။ မြို့သူမြို့ သား တွေဟာ ချင်းတွင်းရေသောက်သူများဖြစ်ကြတဲ့အတွက် အသား အရေ စိုပြေ လှပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ချင်းတွင်း မြစ်ရေဟာ အလုံမြို့သူမြို့သား တွေရဲ့ နှလုံးသားများ ဖြစ်နေ ပါ တော့တယ်။
မစုစုလတ်ဟာ ဦးလှမြတ်+ ဒေါ်စန်းရီဆိုတဲ့မိဘနှစ်ပါး၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများနှင့်အတူ အလုံမြို့၊ ရွေတံ ခါးရပ်မှာနေ ထိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့မိသားစုဟာ မျိုးရိုး အစဉ် အဆက်က တည်းက အေးအေး ဆေးဆေး နေတတ်ကြသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဖခင်ဦးလှမြတ်ကတော့ အရောင်း အ၀ယ်နဲ့သာ အချိန်ကုန် နေတတ်ပြီး မိခင်ဒေါ်စန်းရီမှာတော့ အထက ( ၁ ) အလုံမှ ကျောင်းဆရာမ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာမဖြစ်သည့်အလျောက် ခလေးငယ်များ ကျောင်း ပညာ ရေးဖြင့်သာ အချိန်ကုန်ခဲ့ရပါတယ်။
"တပည့်မရှား တစ်ပြားမရှိ ပီတိကိုစား အားရှိပါ၏" ဆိုတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် မိမိရဲ့သား သမီးများကို " အမျိုးကို ဘယ်လိုချစ်ရမယ်၊ ဘာသာတရားကို ဘယ်လို လေးစား တန်ဖိုး ထားရမယ်"စတာတွေကို ဆုံးမသွန်သင်ဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင်သမီးဖြစ်သူ မစုစုလတ်တောင် အရွယ်ရောက်လို့ လှသွေးကြွလို့ နေပါပြီ။ အသားကလည်း ဖြူ ရုပ်ဆင်း အင်္ဂါ ကလည်း ချောမွေ့၊ ခန္ဓာကိုယ် အချိုး အစား ကလည်း ပြေပြစ်တော့ မြင်သူ တကာ ငေးမော ရလောက်အောင် လှပ လွန်းပါတယ်။ အလှပေါ် အယဉ်ဆင့်ဆိုသလို သူ့ရဲ့ ရိုးသားမှု ဂုဏ်ကလည်း ပိုပြီး တော့ လှပတင့်တယ်မှု ကိုအရောင် တောက်စေပါ တယ်။
အရွယ်လည်း ရောက်လာတဲ့မစုစုလတ်ဟာ မိဘတွေရဲ့ဝင်ငွေကို တစ်ဘက်မှ ကူညီပြီး ရှာဖွေပေး ချင်တဲ့ အတွက် စက်ချုပ်ပ ညာကို သင်ယူခဲ့ပါ တယ်။ ဒီပညာနဲ့ပဲ မိဘ ၀င်ငွေကို တစ်ဘက် တစ်လမ်းက ရှာဖွေပြီမိဘကျေးဇူး ဆပ်ခဲ့ပါတယ်။ အလုပ် အကိုင်လေးက လည်းရှိ၊ ရုပ်ရည် ကလည်းချော၊ သဘောမနောက လည်းဖြူဆိုတော့ သူကို လှမ်းခြူဖို့ ကြိုးစားနေကြတဲ့ ကိုကို လူပျိုကာလသားတွေ ကလည်း ၀ိုင်းဝိုင်းလည်အောင် ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ရာဇင်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ် ယောက်လည်း အပါအ၀င်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ ရာဇင်ဟာစုစုလတ်
အပ်ချုပ်ဆိုင် ကိုသွားတိုင်း လမ်းမှစောင့်ပြီး ပိုးပန်းလေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ရိုးသားဖြူစင်ဖြောင့်မတ်တဲ့ စုစုလတ် ကို အာဘောင်အာရင်းသန် သန်ဖြင့်ချိုမြရွှင်ပြ တဲ့ရည်းစား စကားများ ပြောပြီး စုစုလတ်ရဲ့ အချစ်ကို ရယူ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အချစ် မျက်ကန်း သည်မလေး စုစုလတ်ဟာ ရာဇင်ရဲ့ အချစ်ကို လက်ခံ ရယူပြီးချိန် မှာတော့ ရာဇင်ဟာ မစုစုလတ် အပေါ် အလိုလိုက်အ ကြိုက်ဆောင်ကာ အစွမ်းကုန် ယုယကြင်နာ မှုများ ပေးစွမ်း ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး မစုစုလတ် ကြိုက်တတ်တဲ့ အမှတ်တရ ပစ္စည်းလေးများကို ၀ယ်ပေးလေ့ ရှိခဲ့ပြီး အပြုံးချိုချို မျက်နှာထားလေးနဲ့ အကြွားပိုပြခဲ့ပါတယ်။ မိန်းခလေး တစ်ယောက်ကို ဘယ်လို ပြောရမယ် ဘယ်လိုချဉ်း ကပ်ရမယ်၊ ဘယ်လိုမြူဆွယ် ရမယ် ဆိုတာကိုလည်း ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင်ပြီး မိန်းမကျမ်းကျေထားပုံ လည်းရပါတယ်။
ရာဇင်နဲ့မစုစုလတ်ဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်သိပ်ချစ်ကြပေမယ့် မတူညီတဲ့ခြား နားချက် တွေ ရှိခဲ့ကြပါတယ် အဲဒါကတော့ လူမျိုးလည်းမတူ၊ ဘာသာ ကလည်းခြားနား လို့နေပါတယ်။ မစုစုလတ်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာ လူမျိုးစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ မိဘနှစ်ပါးက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ မြန်မာအမျီုးသမီး
လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရာဇင်ကတော့ မြန်မာလူမျိုးလည်း မဟုတ်သလို ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ် ဆည်းကပ် သူလည်း မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုမတူညီတဲ့ ခြားနားမှုလေးတွေကြောင့် မစုစုလတ် မိဘများ ကလည်း ရာဇင်နဲ့ သဘောမတူခဲ့သလို မစုစုလတ် ကိုယ်တိုင်ကလည်း ရာဇင်နဲ့ လက်ထပ်ဖို့ ငြင်းဆန် ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရာဇင်က မစုစု လတ်ကို "လူမျိုးမတူ ဘာသာမတူတာနဲ့ကိုယ်တို့နှစ်ယောက် ဝေးရမယ် ဆိုတာ လုံးဝ မဖြစ်စေရဘူး။ ငါလည်းငါကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဘာသာကို ကိုးကွယ်မယ်။ မင်းကိုလည်းမင်းကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဘာသာကို လွပ်လွပ် လပ်လပ်ကိုး ကွယ်ယုံကြည်ခွင့် ပေးမယ်"ဆိုပြီး အာမခံချက် ရဲရဲတင်းတင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အရိုး ခံမ စုစုလတ်ခမျာ စိတ်ထဲမှာ ရာဇင်ဟာ အခြားအခြားသော လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြား တွေနဲ့ မတူ လိမ္မာယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်။လူမှုရေးရှိတယ်၊သူ့အပေါ်ကို နားလည်မှု ပေးတယ်၊ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလည်း ပေးတယ်ဆိုပြီး တစ်ကိုယ်တော် ချီးမွမ်း ခမ်းထုတ်ကာ ရာဇင်ကို မိုးကျရွေ ကိုယ် နတ်သားတစ်ပါးလို ထင်လာခဲ့ပါတယ်။မစုစုလတ်မိဘတွေကလည်း ရာဇင်နဲ့ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ဖို့ အမျိုးမျိုးဖြောင်း ဖျခဲ့ကြပါတယ်။ " သမီးရယ်အခု သမီးနဲ့ ချစ်ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်လေးနဲ့တော့ မယူပါနဲ့၊ သမီးဒီကောင်လေးကို လက်ထပ်ယူမယ်ဆိုရင် မေမေတို့ မိဘဘိုးဘွားအစဉ်အဆက်တွေ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ မျိုးရိုးဗီဇတွေ ပျက်စီးကုန် လိမ့်မယ်၊သမီးကြားဖူးမှာပါ၊မြေမျိုလို့လူမျိုးမပြုတ် လူမျိုမှလူမျိုးပြုတ်မယ်ဆိုတာ၊ ဒီစကားဟာ ရှေးလူကြီးတွေက သက်သက်အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူး၊ သမီးတို့လို အချစ် မျက်ကန်းတွေအတွက် အရေးတကြီးမှာခဲ့တဲ့စ ကားဖြစ်တယ်၊ သမီးအခု ဆိုရင် အဲဒီစကားရဲ့ စည်းတစ်ဘက်ကို ရောက်ဖို့ တာစူနေပြီ၊ အသိတရားနဲ့ သတိ ထားပါ သမီးရယ်၊ မေမေလည်း ငယ်ရာက ကြီးလာတာမို့ သမီးတို့လူငယ်တွေရဲ့အချစ်ဟာဘယ်လောက်ထိ နက်ရှိုင်း စူးနစ်တယ် ဆိုတာ မေမေနားလည် ပါတယ်။ မေမေတို့နဲ့ အမျိုးတူဘာသာတူ၊ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် လမ်းဘေးမှာ ခြေပြတ်လက်ပြတ်တောင်းစားနေတဲ့ သူတောင်းစား နဲ့ဆို ရင်တောင် မေမေအခုလိုမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ငိုယိုပြီး သမီးကိုတောင်းပန်နေမှာ မဟုတ်ဘူး၊ လမ်းဘေးက သူတောင်းစားနဲ့ယူလို့ ငါ့သမီးကမွေးတဲ့မေမေ့မြေးလေးတွေ ဟာ မြန်မာ လူမျိုး စစ်စစ်ဖြစ် ရသေးတယ်၊အခုသမီးချစ်ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ သာယူမယ်ဆိုရင် ငါ့သမီးက မွေးတဲငါ့မြေးလေးတွေဟာ လူမျိုးခြားက ပြားလေးတွေ ဖြစ်နေချေရဲ့။ ဒါကြောင့်မို့ မေမေ့ကို သနား ကြင်နာသော အားဖြင့် ကျေးဇူးဆပ်တဲ့အနေနဲ့ ဒီကောင်လေးကိုတော့လုံးဝ လက် မထပ်နဲ့ နော် "ဆိုပြီး မိခင်ဒေါ်စန်းရီ ခမျာ သမီးဖြစ်သူကိုငိုယိုပြီးတောင်းပန်ရှာပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မစုစုလတ်ကတော့ ခပ်မိုက်မိုက်ပဲ အချစ်သူရဲကောင်းကြီး လုပ်ပြီးရာဇင်နဲ့ နှစ်ဦး သဘောတူ လက်ထပ် ယူလိုက်ကြပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက မစုစုလတ်ဟာကမ်းမမြင်လမ်းမမြင် နှစ်ဦးသား ချစ်ရည်လူးကာ ပျော်ရွင် လိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း၊ လောကမှာသူ့လောက်ကံကောင်းသူ မရှိဟုပင် ထင်ခဲ့မိပါတယ်။ သူတို့လက်ထပ်ပြီး လို့နှစ်လလောက်ကြာလာတဲ့ အခါမှာတော့ မင်းသားခေါင်း စွပ်ထားတဲ့ ဘီလူးမျက်နှာဟာ တစ်နေ့တခြား ထင်ထင်ရှားရှား ပေါ်လွင် လာပါ တော့တယ်။ ရာဇင်ဟာသူတို့ ဘာသာရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း မစုစုလတ်ကို သူတို့ ဘာသာထဲ ၀င်ရမယ်လို့ အကျပ် ကိုင်လာပါတယ်။ နောက်ပြီး ရာဇင်ကတကယ်လို့
မစုစုလတ် အနေနဲ့ သူတို့ ဘာသာထဲ ကိုမ၀င်ပဲ ဗုဒ္ဓ ဘာသာကို ဆက်လက် ကိုးကွယ် ယုံကြည် နေဦးမယ် ဆိုရင် သူတို့ ဘာသာရဲ့ထုံးစံအရတရားဝင် ဇနီးမယားဖြစ်မလာ နိုင်ကြောင်း၊ မွေးလာတဲ့ သားသမီး တွေမှာလည်း တရားဝင် သားသမီး မဟုတ်တော့ဘဲ တိတ်တိတ်ပုန်း ရထားတဲ့သားသမီးများ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် အမွေဆက်ခံခွင့် မရရှိနိုင်ကြောင်း၊ မစုစုလတ် ကိုယ်တိုင် မှာလည်း၊ တရားဝင်ဇနီးမယား မဖြစ်သေးတဲ့ အတွက် လင်မယားချင်း ကွဲကွာ တဲ့အခါ ဘာပစ္စည်းမှမရနိုင်ကြောင်း၊ ဒါကြောင့်မို့ မစုစုလတ်ကိုယ် တိုင် တရားဝင် ဇနီးဖြစ်အောင် သူတို့ဘာသာထဲဝင်ပြီး သူတို့ဘာသာနဲ့ အညီလက်ထပ် ရမညီဖြစ်ကြောင်း အကျပ် ကိုင်လာပါတယ်။ နောက်ပြီး ရာဇင်ရဲ့မိဘ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ ကလည်း သူတို့ အိမ်မှာ တစ်ခြား ဘာသာကို ကိုးကွယ် ယုံကြည်တဲ့ မစုစုလတ်ရှိနေလို့လာဘ်မရှိတာ စီးပွားရေး ကျတာဆိုပြီး မစုစုလတ် အပေါ် အပြစ်ပုံချကာ မကြည်ဖြူ နိုင်တော့ဘဲ ငြိုငြင် လာကြ ပါတယ်။ အခုတော့ လူမျိုးခြားဘာသာခြားရဲ့စကားကိုယုံကြည်ပြီး လက်ထပ် ယူခဲ့တဲ့ မစုစုလတ်ရဲ့ မိုးကောင်းကင်ရွေအိမ်မက်ကြီးဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်း အရောင်တွေ လွင့်ပါးပြီး ပျက်ပြယ် ခဲ့ရပါပြီ။ပျော်ရွင် ရယ်မောခြင်းတွေဟာလည်း တဖြည်းဖြည်းအရည်ပျော်ကာ ငိုကြွေးခြင်း ရဲ့ လမ်းစဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။သူရဲ့နှုတ်ခမ်းထက်က ချိုချိုမြမြစကားလုံးတွေဟာ ခုတော့ခါး တမာတောလို ဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ ကြင်စဦးဇနီးမောင်နှံတုန်းက အကြင်နာ ပုံရိပ်တွေ ဟာလည်း တံလျပ်ပမာ အဝေးဆီသို့သာ တရိပ်ရိပ် လွင့်မျောပျောက်ကွယ်သွား ရပြီတကား။
အခုတော့မစုစုလတ်ခမျာ ဆုံးဖြတ်ချက် တခုခုတော့ချ ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့ မိဘဘိုးဘွား တွေရဲ့ မျိုးရိုးဇာတိကိုငဲ့မည်လော၊ မိမိရဲ့တစ်ဘ၀စာ တစ်နပ်စာရှေ့ ရေးကိုငဲ့ မည်လော၊ ပဒိုင်းသီးကဲ့သို့ စားလည်းရူး ဆုတ်လည်းစူးဖြစ်ရတော့မည့်အခြေအနေသို့ ဆိုက်ရောက်နေပါတော့တယ်။ မိမိရဲအမိုက်ဇာတ်ကို မိမိကိုယ်တိုင်ပဲ ပြီးဆုံးအောင် က ရပါတော့ မယ်။ ဒီအချိန်မှာ အိမ်ပြန်လို့လည်းဘယ်မိဘညီအစ်ကိုမောင်နှမ ကမှ လက်ခံမည် မဟုတ်၊ မိဘညီအကိုမောင်နှမတွေက ဒီလူမျိုးခြားဘာသာခြားကို လက်ထပ်မယူဖို့အတန်တန် တားတဲ့ကြားက မိမိကိုယ်တိုင်က ပိုးဖလံမျိုး မီးကိုတိုးသကဲ့သို့အချစ်သူရဲ ကောင်းကြီးလုပ်ပြီး " ငရဲ " တွင်းထဲသို့ ခုန်ဆင်းခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား။ အခုတော့ မစုစုလတ်ရဲ့ ဘ၀ကတော့ "ပေါက်တဲ့ နဖူးမထူးဘူး" ဆိုတဲ့စကားလိုဘယ်အရာမျိုးကိုမှ မထူး တော့ဘဲ ကံကြမ္မာ ကိုသာ ယိုးမယ်ဖွဲ့ပြီး လူမျိုးခြားဘာသာဇာတ်ထဲကို ခြေစုံပစ်ဝင်လိုက်ရပါတော့တယ်။ လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြား ဇာတ်ထဲ ၀င်ရတယ်ဆိုတာ ပါးစပ်က အပြောနဲ့ ၀င်ပါ့မယ် ဆိုပြီး လုပ်လို့မရဘူး။ သူတို့ ယုံကြည်မှုရှိအောင် သူတို့ခိုင်းသမျှ အကုန်လုပ်ပြရတယ်။ မစုစုလတ်ငယ်ငယ်လေးထဲက ဦးထိပ်မှာ ပန်ဆင်ပြီး ရှိခိုးဦးချခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ဟာ အခုတော့မစုစုလတ်ရဲ့ခြေဖ၀ါးအောက် ရောက်ခဲ့ ရပါပြီ။ မိဘဘိုးဘွားစဉ်ဆက်က အရှေ့အရပ်ကို ခေါင်းပြုအိပ်ခဲ့ရတဲ့မစုစုလတ်ဟာ အခုတော့ ခြေအစုံ ပစ်ကန်ပြီး အိပ်ခဲ့ရပါပြီ။ အိမ်ဦးခန်းမှာ ကိုးကွယ် ယုံကြည်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် ဟာလည်း သာမန်သစ်သားတုံး အမှတ်ဖြစ်ခဲ့ ရပါပြီ။ တန်ခိုးကြီး စေတီ ပုထိုးများ ဟာလည်း မစုစုလတ် ဘ၀အတွက်တော့ အုတ်ပုံ အဖြစ် ရောက်ခဲ့ရပါပြီ။ သို့ပေမယ့် မစုစုလတ် အနေနဲ့ ဘာမှအားအငယ်ခဲ့ပါ။ ဘာကိုမှ လည်းတွေးပြီးမပူပန်ခဲ့ပါ။
မောင်သာ မေ့ဘ၀၊ မောင်သာမေ့ရဲ့ ကမ္ဘာဖြစ်လို့ နေခဲ့မိပါတယ်။ လောကမှာ အမြတ်နိုးဆုံး အရာ တွေလို့ ထင်မှတ် ထားခဲ့တဲ့ မိဘမျိုးရိုးစဉ်ဆက်နှင့်ဘာသာတရားတွေကို ချိန်ခွင် တစ်ဖက်မှာ တင်ပြီးတော့ ရာဇင်ဆိုတဲ့ မောင့်ကို ချိန်ခွင်တစ်ဖက်မှာတင်ပြီး ချိန်တွယ်ခွင့် ရမယ်ဆို ရင်တောင်၊ မောင့်ဖက်မှာပဲ အလေးပေးခဲ့တဲ့ အချစ်မျက်ကန်း သည်မလေး မစုစုလတ်မဟုတ်ပါလား။
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မတ်လသို့ရောက်ခဲ့ပါပြီ။ဒီအချိန်မှာမစုစုလတ်တစ်ယောက်ကျမ္မာရေးမကြာခဏဖောက်ပြန် လို့နေပါတယ်။ညတိုင်းအိပ်တဲ့အခါတွေမှာလည်းအိမ်မက်ဆိုးများမြင်မက်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒုက္ခရောက် တဲ့အခါ ထွက်ပေါက်အဖြစ် လင်ယောက်ျားမသိအောင် ဗေဒင် ဆရာကို အားကိုးတကြီးနဲ့ သွားမေးပါတယ်။ ဗေဒင်ဆရာက ဘုရားမှာ အုန်းညွန့်၊ ဒါန်းညွန့်များ လှူပြီး ကုသိုလ်ကောင်းမှုများ လုပ်ဖို့ ယတြာပေး လိုက်ပါတယ်။ မစုစုလတ်အနေနဲ့ ရောဂါ ဝေဒနာ သက်သာ ပျောက်ကင်းစေဖို့ ဗေဒင်ဆရာ ပေးလိုက်တဲ့ ယတြာကိုချေချင် ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘာသာခြား ဇာတ်ထဲ ၀င်ထားတဲ့ သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘုရားကျောင်းကန်မှာ သွားပြီးအုန်းညွန့်၊ ဒါန်းညွန့်လှူဖို့ အခက်တွေ့ရ ပါတော့တယ်။ဒါပေမယ့် ဥပါဒါန်ကြောင့် ဥပါဒ်ရောက် မဖြစ်ရအောင်(၆. ၃. ၂၀၀၀) နေ့မှာဘုရားကျောင်းကန်ကို သွားမနေတော့ဘဲ မိမိအိမ်မှာ တင်လစ်ပို ပုလင်းထဲကိုအုန်းညွန့်၊ ဒါန်းညွန့်များထိုးကာ အပ်ချုပ်စက် ခုံပေါ်မှာ ပဲတင်လှူ လိုက်ပါတယ်။ ဒီစက်ချုပ် ခုံပေါ်မှာ ပန်းတင်လှူတာကိုမြင်သွားတဲ့ ယောက်မဖြစ်သူ နိုရဘီက စုစုလတ် ဘုရားမှာပန်းတင် လှူကြောင်းအကိုဖြစ်သူရာဇင်နှင့် သူ့အိမ်သားတွေကို တိုင်ကြားပါတယ်။ ရာဇင်နဲ့ယောက္ခမဖြစ်သူများဟာ စုစုလတ် သူတို့အိမ်မှာ ပန်းတင်လှူကြောင်း လည်းသိရော ယမ်းပုံမီးကျ ဒေါသ ပေါက်ကွဲကာ မစုစုလတ်ကို ခေါ်ပြီးပါး တွေနားတွေ ရိုက်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ရာဇင်က "နင့်ဘုရားရှိခိုးမယ့်အစား င့ါဟာကြီး ရှိခိုး” ဆိုပြီးပုဆိုး လှန်ပြကာ ရှိခိုး ခိုင်းပါတယ်။ မစုစုလတ်ကိုရိုက်နှက်တဲ့နေရာမှာ ရာဇင်တင် မကပဲ ရာဇင့် အမေနင့်မောင်နှမလေးယောက်တို့ က၀ိုင်းပြီးရိုက်နှက်ကြပါတယ်။ လူလေး ယောက်က ၀ိုင်းပြီးရိုက်နှက်ကြတဲ့အတွက် မစုစုလတ်ခမျာ အလွန် နာကျင်လွန်းလှတာ မို့ အော်ဟစ် ငိုကြွေးပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကူအညီ လှမ်းတောင်းမိပါတယ်။ မစုစုလတ်က ပတ်ဝန်းကျင် ကို အော်ဟစ် အကူအညီတောင်းရမလား ဆိုပြီး ရာဇင်တို့မိသားစုရဲ့ ဒေါသဟာ အထွက် အထိပ်သို့ ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အိမ်ရှိတံခါးအားလုံးကိုပိတ်ပြီး စုစုလတ်ပါးစပ်ထဲသို့ အ၀တ်စုတ်များကို ထည့်ကာ မသေမချင်း သတ်ဖြတ် ပစ်လိုက် ကြပါတယ်။
မစုစုလတ်ခမျာမှာလည်း မိန်ကလေးဖြစ်နေတာကတစ်ကြောင်း လေးယောက်အားကိုမယှဉ်နိုင်
တာက တစ်ကြောင်းဆိုတော့ သရဲသဘက်စီးနေတဲ့ သူတို့စက်ကွင်းထဲ ကဘယ်လိုမှ ရုန်းမထွက်နိုင်ဘဲ အိမ်ထဲမှာ တင်ပဲပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားပါတယ်။ ရာဇင်တို့မိသားစုဟာ အလွန် လည်ကြပါတယ်၊ ယုတ်မာတဲ့နေရာ မှာလည်း နှစ်ယောက်မရှိဘူးလို့တောင် ပြောလို့ရ ပါတယ် ။ စုစုလတ်အလောင်းကို မတော်တဆသေဆုံးမှု သေခင်းပုံစံမျိုးနဲ့ သဲလွန်စဖျောက်ဖို့ ကြိုးစားကြ ပါတယ်။
တစ်မြို့လုံးမှာရှိတဲ့ သူတို့အမျိုးတူ၊ ဘာသာတူတွေအားလုံးကလည်း ငွေအားလူအားနဲ့ ၀ိုင်း ၀န်းပြီး လက်စလက်န ဖျောက်ပေးကြပါတယ်။ စုစုလတ် အလောင်းကို မြေမမြုတ်ပဲမီး သဂြိုဟ် ဖို့ စီမံကြပါတယ်။ မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်စန်းရီမှာ သူသမီး ဟာသွေးရိုး သားရိုးနဲ့ သေတာ မဟုတ်မှန်းတော့ သိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာ အမှုဖွင့်အရေးယူမယ် ဆိုရင်လည်း လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားတွေက ငွေအား လူအားနဲ့ ဖုံးဖိထားတဲ့ အတွက် အမှုမှန်ပေါ်ပေါက် ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာ ကြိုသိထား ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ဒေါ်စန်းရီက သမီးဖြစ်သူရဲ့အလောင်းကို မြေမြုတ်ခြင်း၊ မီးသဂြိုဟ်ခြင်းမပြုပဲ ပုံမပျက် အုတ်ဂူသွင်း ပေးဖို့တောင်း ဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ ဒေါ်စန်းရီရဲ့ ဆန္ဒအတိုင်း အုတ်ဂူ သွင်းပြီး သင်္ဂြိုဟ် လိုက်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကို တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့်နားဖြင့် "မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ရှိကြတဲ့ သံဃာတော်များ နားထဲသို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ကြပါတယ်" သံဃာတော်
များက လည်း ညတွင်းချင်း စုရုံးပြီး စုစုလတ်ရဲ့အုပ်ဂူကို ဖောက်ထွင်းပြီး စစ်ဆေးကြည့် ကြပါတယ်။ ရာဇ၀တ်ဘေး ပြေးမလွတ်ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ရက်ရက်စက် စက် လူမဆန်စွာ သတ်ဖြတ် ထားတဲ့ အလောင်းရဲ့ အမှုမှန်ကား ယခု အခါဘွား ခနဲပေါ် လာပါတော့တယ်။ ဒီသတင်း စကားဟာ တစ်ခဏအတွင်းမှာပဲ တစ်မြိုလုံးပြန့်နှံ့ သွားပြီးတုန်လှုပ်ခြောက်ခြား သွားခဲ့ကြပါ တယ်။ မြို့နေလူထုတွေ အားလုံး ဟာမ ခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ကာ တွေ့ရာ သင်္ချိုင်းဓါးမ ဆိုင်းဘဲ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ပြသဖို့ လမ်းမပေါ်ဆီသို့ အသီးသီးထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ အမှိုက်ကစ ပြသာဒ်မီးလောင်မဖြစ်ရအောင်အမြော်အမြင်ရှိတဲ့အာဏာပိုင် အဖွဲ့ အစည်း များမှ အကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ် များရောက်ရှိလာကြ ပြီး တရားခံများကို ဥပဒေအရ ထိရောက် စွာ အရေးယူ ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားတော့မှ ပြဿနာ ငြိမ်းအေး သွားပါ တော့တယ်။
အာဏာပိုင်အဖွဲ့ အစည်းမှအကြီး အကဲပုဂ္ဂိုလ် များကလည်း သူတို့ရဲ့ ကတိစ ကား အတိုင်း တရားခံ ရာဇင်နှင့် တကွ အပေါင်းအပါလေးဦးတို့ကို ညတွင်းချင်း ဖမ်းဆီးပြီး အားနွဲ့တဲ့ မိန်းခ လေးကို လေးယောက် ၀ိုင်းပြီး မတရား ညှင်းဆဲ သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ အသီးသီး ထောင်ဒဏ် တစ်သက် တစ်ကျွန်း စီ ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
တစ်ချိန်က သာယာလှပတဲ့ အလုံမြို့ လေးဟာ ယခုတော့ သွေးစွန်းပြီး အကျည်းတန် လေခဲ့ပြီ။ ကြည်လင် အေးမြတဲ့ ချင်း တွင်းရေဟာလည်း သွေးနှောပြီးတော့ နောက်ကျိ ခဲ့လေပြီတကား။
ထိုထိုသို့သော အဖြစ်ဆိုးများမှ လွန်မြောက်အောင်
(၁)။ ဘာသာခြားများရောင်းချသောဈေးဆိုင်တွင် ဈေးမဝယ်ပါနှင့်။
(၂)။ ဘာသာခြားများနှင့် လူမှုရေးရာများ ကင်းရှင်းစွာနေထိုင်ရန်။
(၃)။ ဘာသာခြား များနှင့် အိမ်ထောင် ပြုမှုမှ ရှောင်ကြဉ်၍ မိမိဘာသာ မိမိလူမျိုးများနှင့်သာ ဆက် ဆံပေါင်း သင်း နေထိုင်ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
စာဖတ်သူ အားလုံး သက်ရှည် ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာပြီး လိုရာဆန္ဒများ တစ်လုံးတစ်ဝတည်း ပြည့်ဝကြပါစေ။
Posted by drmyochit Saturday, May 25, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
ကျွန်တော့်မှာ လေးနှစ်အ ရွယ်မြေးငယ်တစ်ဦးရှိသည်။ ဒီ မြေးငယ်အတွက် နောင်ကြီးပြင်း လာမည့် အချိန် ကာလနှင့် အသက် အရွယ်တွင် ကြုံတွေ့ရမည့်ခေတ် ကြီး၏အနေအထားကို တွေး၍ ရင်လေးရပါသည်။ အိုင်တီ နည်း ပညာများ၊ တိုးတက်မှုခေတ်ရေ စီးကြောင်း၌ မျောပါသွားမည်ကို လည်း စိုးရိမ်မိသည်။
အရွယ် မရောက်သေးသော မိန်းကလေးများကို တစ်ဖက်လိင် မတူသောယောက်ျားများက ကာမ ဆန္ဒတစ်ခုတည်းကိုသာကွက်၍ ကြည့်ပြီး ကာမဆန္ဒကို အဓမ္မ အနိုင်ရယူမှုများသာဖြစ်သည်။
ကြားသိနေ ရသောယခုမျက် မှောက်သတင်းဖြစ်ရပ်တွေကလည်း စုံလှသည်။ မကြားချင်အဆုံး၊ မဖတ်ချင် အဆုံး။
ကျွန်တော် စာအုပ် စာနယ် ဇင်းဆိုင်တွင် စာဖတ်ပရိသတ် ဖောက်သည်တစ်ဦးရှိသည်။ သူက မှုခင်း သတင်း ဂျာနယ်ကို ထွက်သမျှအပတ်စဉ်ဝယ်သည်။
““မှုခင်းဖတ်လျှင်၊ အနိဋ္ဌာရုံ၊ ကျက်သရေမရှိ””ဟူသော အတွေး အခေါ်ဟောင်းက တစ်ကမ္ဘာမှာ ချန်ထားခဲ့ပါပြီ။
မကောင်းမှုလွန်ကျူးမည့် သူများကိုကြိုတင်ဟန့်တားကာ ကွယ်သော ပညာပေးမှု၊ ဆောင် ရန်၊ ရှောင်ရန် နည်းပညာ ကိုမသိ ၍ မှုခင်းများကို ကန့်လန့်ကာချ ထားခဲ့သောသူများ၊ ယခုတော့ နဖူးတွေ့၊ ဒူးတွေ့ကြုံ ကြရ ပါပြီ။
အရွယ်နှင့်မမျှအောင် ကာမ ဂုဏ်ဆိုင်ရာ လွန်ကျူးခံရသူတွေ၊ သွေးဆောင်ဖြားယောင်းခံရသူ တွေ များပြား လာသော ယနေ့ ခေတ်ကြီးကို သမီးရှင်၊ မြေးရှင် ဖြစ်ရသော ကျွန်တော့်အဖို့ ရင် တမမဖြစ်ရပါပြီ။
အရွယ် မရောက်သေးသော မူ-လယ်-ကျောင်းသူကလေးများ ကို၊ ချစ်သူသမီးရည်းစားဘ၀ အဖြစ် ကာမရ ယူ အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ အခြားနည်းပုံစံဖြင့် ဖြားယောင်း သွေးဆောင်ဘ၀ဖျက်ဆီးခြင်း၊ လူ့ ဘ၀တွင် ဥမမယ်-ဇာမမြောက် မဖြစ်ခင်ကပင်၊ ဘ၀ကိုအရှုံးပေး သည့်အသွင်ဖြင့် နစ်မွန်းခံရသော ဘ၀ဖြစ်ရပ်များ ကိုကြားသိ ရ၍၊ စိတ်မကောင်းပါ။ မိဘချင်း၊ မြေး အဖိုးချင်း၊ စာနာစိတ်ဖြစ်မိပါ သည်။
ချစ်သူရည်း စားဘ၀ဖြင့်၊ အချစ်နယ်ကျွန်သွားပါက ကုစား ရန်ပဋိသန္ဓေတားဆေးများက အလွယ် တကူဝယ် ယူနိုင် သည်။ လမ်းဘေးကွမ်းယာဆိုင်မှ၊ မှန် ကောင်တာကြီးဖြင့် ရှိုးကျကျ ရောင်းချသောစတိုးဆိုင်၊ ဆေး ဆိုင်များ အထိ၊ ကုစားရနိုင်သော ဆေးများက လိုသလောက်ရနေ သောအချိန်ကာလ။
ကိုယ်ဝန်ရလျှင် ဖျက်ချပေး ရန် အရပ်လက်သည်ကလည်း ကိုယ်ဝန်သန္ဓေအနုအရင့်ပေါ် မူတည်၍ ကျပ်ငွေ (၂၀၀၀၀-၅၀၀၀၀) ထိပေးနိုင်လျှင် အမှုကိစ္စ က နာရီပိုင်းအတွင်း ပြီးစီးနိုင် သော ““လူသတ်ကုန်း””များ လည်း နေရာ အတော် များများ၌ ကြီးစိုး လုပ်စားနေသောအချိန်ကာလ။
တည်ဆဲ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ တိုင်အောင်၊ မကျရောက်၊ မရင် ဆိုင်ရဘဲ ပလပ်၊ ပျက်ပြယ်သွား သော မုဒိမ်းမှုအနိုင်ကျင့်၊ ဗိုလ်ကျ စိုးမိုးမှု၊ သွေးသားသောင်းကျန်း မှုကလည်း ဒုနှင့်ဒေး။
မိဘအုပ်ထိန်းသူ၊ အတန်း ပိုင်ဆရာ၊ ဆရာမများက၊ ဖာသိ ဖာသာနေလိုက်ပါက ““ကာမ မုဆိုး””အနိုင်ကျင့်သူများ၏လက် ၀ယ် ပညာရေးတစ်ပိုင်းတစ်စဖြင့် ရေတိမ်နစ်နေကြရသော သမီး ငယ်၊ မြေးငယ်များအတွက် ကျွန် တော်အချိန်ပေး၍ စာနာမိလိုက် ပါသည်။
တည်းခိုခန်းမှ အရွယ်မ ရောက်သော မိန်းကလေးကို ခေါ်လာပြီး နာရီပိုင်း၊ အချိန်ပိုင်း၊ တည်းခိုသည်ကို သားသမီးချင်း စာနာစိတ်ဖြင့် တည်းခိုခန်းမန်နေ ဂျာများ၊ အုပ်ချုပ်စီမံသူများက ဘာကြောင့် လျစ်လျူရှုနိုင်ကြ တာလဲ။
လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ် ၀န်းကျင်က ကျွန်တော်တို့မြို့မှာ ပင် ရင်းနှီးသောပုဂိ်္ဂုလ်ဆယ်ကျော် သက်ရွယ်ယောက်ျားလေးအား မူလတန်းကျောင်းသူကလေးကို ကျူရှင်ပို့ခိုင်းရာမှဖြစ်ပေါ်သွား သော မုဒိန်းမှု၊ ဖြားယောင်းသွေး ဆောင်မှု။
စည်ပင်ဈေးသို့ မုန့်ဝယ်ခိုင်း ရာမှ ပြန်လာသောမူလတန်း ကျောင်းသူကလေးကို ဘုန်းတော် ကြီးကျောင်းဝင်း ချောင်ကျရာ နေရာသို့ ခေါ်ဆောင်၍ အဓမ္မ ကြံစည်မှု။
စသည့် စသည့် တရားခွင် ရောက်ပြစ်မှုများနှင့် ရပ်သိရွာသိ အနေအထားမျှဖြင့် ဥပဒေက အရေးမယူလိုက်ရသော တရားခွင် သို့ မရောက်သောပြစ်မှုများက လည်း စုံမှစုံ၊ များမှများ။
အိုင်တီနည်းပညာပိုင်းဆိုင် ရာတိုးတက်မှုနောက်ဝယ် ချစ်သူ ရည်းစားချင်း၊ ကိလေသာကာမ ဂုဏ်တိုးပွားအောင် လမ်းပြဖော် ဆောင်နိုင်သော သိပံ္ပနည်းပညာ ပစ္စည်း၊ အင်တာနက်များလည်း တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပေါ်နေပြီ။
ညစ်ညမ်းခွေများတွင်လည်း ဖြစ်ရပ်စုံ၊ မြင်ကွင်းစုံများကို ဇာတ် ကွက်ဇာတ်လမ်းဆင်၍တစ်ဖုံ၊ တည်းခိုခန်းဖြစ်ရပ်အသွင်ဖြင့်တစ် မျိုး မြင်ကွင်းကျယ်များဖြင့် ထုတ် ခဲ့ကြသော စီဒီခွေများကိုလည်း၊ နိုင်ငံတော်က မူးယစ်ဆေးဝါး အသွင် လမ်းကြိတ်စက်များဖြင့် မဟာဗျူဟာဖွင့်၍ ဖျက်ဆီးနေ ကြပါပြီ။ လမ်းဘေးအရောင်းဆိုင် များကိုလည်း ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ အရ ဟန့်တားနေကြပါပြီ။ သက် ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး၊ အဖွဲ့အစည်း များကလည်း ချေမှုန်းနေကြပါ ပြီ။
နှစ်ပေါင်းသုံးလေးဆယ်ကာ လအတွင်း လွှမ်းမိုးအနိုင်ယူခဲ့ သော ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး ကြီး၏ ရေစီးကြောင်းဝယ် အမှိုက် သရိုက်များက ပေါလောမျောနေ ကြပါဦးမည်။
အနောက်နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံကြီးများက စာသင်ကျောင်း များမှာ လိင်ပညာပေးကို ကျောင်း ချိန်အတွင်း ဘာသာရပ်တစ်ခု အနေဖြင့် သင်ကြားပို့ချနေသည်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်လည်း လိင် ပညာပေးဟောပြောမှုများလောက် တော့ သက်ဆိုင်ရာမှ အချိန်ပေး ဆောင်ရွက်သင့်ပါပြီ။
လိင်ကိစ္စပြောရ၊ ဆိုရမည်ကို သာရှက်နေကြတာပါ။ အသွင် မတူယောက်ျားလေးနှင့် ပန်းခြံ၊ တည်းခိုးခန်း၊ ဆိတ်ကွယ်ရာနေ ရာနှင့် သန္ဓေသားဖျက်ချရာနေ ရာသို့ ၀င်ထွက်သွားရမည်ကို တော့ သူတို့မရှက်တတ်ကြပါ။ ““လူသတ်ကုန်း””မှာ လူ့ဘ၀သို့ မရောက်သေးသော ရင်သွေးငယ် တို့ကို အရှင်လတ်လတ် သတ်နေ တာကိုတော့ သူတို့မရှက်တတ် ကြပါ။
တက္ကသိုလ်ရပ်ဝန်းဒေသတွင် မိဝေး၊ ဖဝေးဖြင့် ပညာသင်ယူနေ ကြသော ကျောင်းသူကလေးများ ဘ၀မေ့ပြီး၊ ခေတ်နှင့်အပြိုင် အသွင်မတူသောလိင်၊ ယောက်ျား များကို ဆက်ဆံပေါင်းသင်းပြီး၊ ပညာရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှ သွေဖီကာ၊ ငွေကိုရေလိုသုံးရာမှ အကျင့်ပျက်အဖြစ် ကိုယ်ဝန်ရ လာကြသောသတင်းများကလည်း ရိုးအီနေပါပြီ။
လင်ယူသားမွေးလုပ်ခြင်းကို ထမင်းစား၊ ရေသောက်၊ စားပြီး သားထမင်းပန်းကန်ရေဆေးသကဲ့ သို့ အလွယ်ဆုံးကျင့်သုံးပြီး၊ ဂုဏ် သိက္ခာ၊ မျိုးရိုးဗီဇများကို ကြမ်း ပြင်ထက်၊ မြေကြီးထက်ဝယ် နင်း ချေခဲ့ကြပါပြီကော။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကျောင်းနေအရွယ် ရင်သွေးငယ် များကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင် ကျင့်စော်ကားမှုကို ကာကွယ် တားဆီးဖို့ ဥပဒေဆိုင်ရာကူညီရေး အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့တို့ နှင့် အခြားလူမှုရေးအဖွဲ့တို့က တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ စာ သင်ကျောင်းများမှ ပညာပေး ဟောပြောပွဲများပြုလုပ်မည်ဟု သိရသည်။
အသက် ၁၃ နှစ်-၁၆နှစ် ကြား မိန်းမပျိုကလေးများကို လိင်မတူသောယောက်ျားများက ““အရှက်နှင့်အသက်””ယှဉ်တွဲပြီး ကုစားနိုင်ဖို့ ပညာပေးရန်လိုသည်။ တစ်ဖက်က မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်လို သူ ယောက်ျားအမျိုးသားများ၏ လှည့်ကွက်လိမ်ကွက်၊ နွံထံမှာ မနစ်မွမ်းကြရအောင် တရား လွှတ်တော်ရှေ့နေဥပဒေပညာရှင် များက မိမိတို့တာဝန်ကျရာဒေသ ခံနေရာဒေသတိုင်း စာသင် ကျောင်းတိုင်းမှာ ပညာပေးသင့် ပါသည်။ တရားခွင်ထဲသို့ ရောက် လာသော တရားခံကို စီရင်ပေးမှု ထက်၊ တရားရုံးသို့ မချဉ်းကပ် လာအောင် ကြိုတင်ကာကွယ် ပညာပေးသင့်ပါပြီ။
ထက်-လယ်-မူ-တက္ကသိုလ် ကျောင်းဝင်းများနှင့် နီးစပ်ရာ ဒေသများတွင် တည်းခိုခန်း၊ အနှိပ်ခန်း၊ ကာရာအိုကေ၊ ကိုယ် ၀န်ဖျက်ချရာ သားဖွားခန်းများ၊ လူသတ်ကုန်းများ ထားရှိနေခြင်း က ပြစ်မှုကျူး လွန်မည့် သူများ ကို အားပေးစေ့ဆော်နေသလိုဖြစ်နေ ပါသည်။
သားသမီးချင်း၊ မြေးမြစ်ချင်း စာနာမှု၊ မြန်မာတို့၏ ပင်ကိုယ် ဗီဇစိတ်ပြည့်ဝစွာဖြင့် မျိုးရိုးနွယ် မပျောက်ရေးကို အမျိုးသားရေး အနိမ့်ဆုံးဝန်တာတစ်ရပ်အနေဖြင့် ယနေ့ပင် ၀ိုင်းဝန်းစတင်ဆောင် ရွက်ကြပါစို့။
ဦးတေဇ နဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ
Posted by drmyochit Saturday, May 25, 2013, under သတင်းများ | No comments
အစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO) တို့၏ လာမည့် အင်္ဂါနေ့ မြစ်ကြီးနားမြို့ဆွေးနွေးပွဲသည် အေးေ အးေ ဆးဆေး အခြေ အနေများနှင့် အဆုံး သတ်နိုင်ဖွယ် ရှိနေသည်။
နှစ်ဘက်တွေ့မည့် စီတာပူရပ်ကွက်ရှိ မဂျွယ်ခန်းမတွင် လေအေးစက်များ တပ်ဆင်ရန် အချမ်းသာဆုံး မြန် မာ့ လုပ်ငန်းရှင် တဦးဖြစ်သည့် ဦးတေဇက အကူအညီပေးထားကြောင်း ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင် တဦးဖြစ် သည့် ဦးစန်းအောင်ထံမှ သိရသည်။
“ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ အုတ်တချပ် သဲတပွင့် အနေနဲ့ အမှတ်တရလေး သူလှူဒါန်းချင်ပါတယ်ဆိုပြီး လာတယ်၊ ပူ တဲ့ အချိန်လည်းဖြစ်နေတော့ ဆွေးနွေးပွဲတွေလည်း တောက်လျှောက် ဒီမှာပဲ လုပ်သွားမယ့် အနေအထား ရှိ တဲ့ အခါ ကျတော့ အဲယားကွန်းလေး တပ်ပေးတာပါ” ဟု ဦးစန်းအောင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး အတွက် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်း တချို့ ကူညီခြင်းကို ကြိုဆိုကြောင်း၊ ဤ အကူအညီများ နှောင်ကြိုးကင်းရန်လည်း လိုအပ်ကြောင်း ဦးစန်းအောင်က ဆိုသည်။
ဦးတေဇသည် ကချင် ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် ပြီးခဲ့သည့် လဆန်းပိုင်းက မြစ်ကြီးနားမြို့ ကျောက် မျက်ဈေး ပွဲတော်တွင် တွေ့ဆုံစဉ် ထိုသို့ လှူဒါန်းရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဦးတေဇထူထောင်ခဲ့သည့် လေကြောင်းလိုင်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းတို့က အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ပညာရေး ရန်ပုံငွေအတွက် ကျပ်သိန်းပေါင်း ရာနှင့်ချီ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ယခင်စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ မိသားစုနှင့် ရင်းနှီးသူဟု ထင်ရှားသည့် ဦးတေဇ သည် လုပ်ငန်းမျိုးစုံ လုပ်ကိုင်သူတဦးဖြစ်ပြီး ထိုလုပ်ငန်းများထဲတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်အတွက် လက်နက် ၀ယ်ယူမှုလည်း ပါဝင်သည်ဟု သတင်းထွက်ခဲ့ဖူးသည်။
ယခု ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေး ဖြစ်မြောက်ရေးတွင် ပါဝင်လှူဒါန်းသည့် ဦးတေဇ၏ ရည် ရွယ် ချက်မှန်ကို မသိရှိရသော်လည်း အကောင်းဘက်မှ ရှုမြင်ကြောင်း KIOမှ ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဟောင်း ဒေါက်တာ မနန် တူးဂျာက ပြောသည်။
“ဘယ်အဖွဲ့ အစည်း၊ ဘယ်ကုမ္ပဏီ မဆို တတ်နိုင်ငံတဲ့ ဖက်က ၀င်ရောက်ကူညီတယ် ဆိုတာကတော့ အ များ အကျိုးအတွက် ဖြစ်တယ်လို့ မြင်တယ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ရဖို့ဆိုတာက အားလုံး ညီညီ ညွတ်ညွတ်နဲ့ လုပ်ဆောင် မှပဲ ပိုပြီး မြန်ဆန်နိုင်မယ်” ဟု ဆိုသည်။
KIO ကိုယ်စားလှယ်များ တည်းခိုရန် KIO ဆက်ဆံရေးရုံး ဖွင့်ခဲ့သည့် နေရာတွင် ပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်း၊ လာ မည့် အင်္ဂါနေ့ မတိုင်ခင် ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုး ဆောင်တို့က လိုင်ဇာမြို့အထိ သွားရောက် ကြို မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
KIO က အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ထားသည့် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖယ်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) မှ ကိုယ်စားလှယ်များကို ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အထူးအကြံပေး မစ္စတာ ဗီဂျေ နမ်ဘီးယား တို့ကို ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရန် ဖိတ်ကြားထားသည်။
ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်တဦးဖြစ်သည့် ဦးစန်းအောင်၏ အဆိုအရ နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်များက တပ်နေ ရာ ချထားရေးနှင့် နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး အတွက် ရှေ့ လုပ်ဆောင်သွားမည့် ကိစ္စရပ်တို့ကို အဓိက ဆွေးနွေး မည် ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
အစိုးရဘက်မှ ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်၊ KIO ဘက်မှ ဦးဆွမ်လွတ်ဂမ်၊ ဗိုလ်ချုပ် ဂွန်မော် စသည့် အ ထင် ကရ ပုဂ္ဂိုလ်တို့က ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ကို ဦးဆောင် တက်ရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
နှစ်ဘက် ဆွေးနွေးပွဲမှ ထောင်သောင်းချီဒုက္ခသည်များ နေရပ်ပြန်ရေးအတွက် အလားအလာကောင်းများ မည် မျှ ထွက်ပေါ်လာမည်ကို မသိရသေးပေ။
ဤတကြိမ် တွင် ဒုက္ခသည်အရေး ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးဖွယ်ရှိသည်ဟုလည်း တချို့က ယူဆနေကြသည်။
ဒေါက်တာ မနန်တူးဂျာက ....
“အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို ခိုင်ခိုင်မာမာ သဘောတူစေချင်တယ်၊ အဲဒါနဲ့ တဆက်တည်းမှာ စစ်ပြေး စစ်ေ ရှာင် ဒုက္ခသည်တွေကို သူတို့ ဒေသကို အမြန်ပြန်နိုင်ဖို့ စီစဉ်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်၊ အခု မိုးတွင်းရောက်ေ တာ့မယ် စခန်းမှာပဲ ဆက်နေမယ် ဆိုတော့ အများ ကြီး ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်” ဟု ပြောသည်။
Posted by drmyochit Saturday, May 25, 2013, under ဆင်ခြင်စရာ | No comments
အချို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာအမျိုးသမီးတွေဟာ ပညာတွေတော့ တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသားရေး စိတ် ဓာတ်၊ ဘာသာရေးစိတ်ဓာတ်မရှိတော့ ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ ပညာတွေက အလကားပါပဲ။ ဒီပညာတွေ တတ် ဖို့ ဆို တာ မိဘတွေက ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီး သင်ပေးခဲ့ရတာဖြစ် ပါတယ်။ နောက်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရက လည်း အခမဲ့ သင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုဘာလို့ သင်ပေးခဲ့ရ တာလဲဆိုရင် နိုင်ငံတော်အတွက် လူမျိုးအတွက် ဘာ သာ သာသနာအတွက် နောက်ပြီး ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်အေင် ဘဝလမ်းကြောင်း နိုင် ဖို့ အတွက် သင်ပေးခဲ့ရ တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစကားလေးကို ဘာလို့ ပလ္လင်ခံနေရတာလဲ ဆိုရင် အမျိုးဘာသာအပေါ် သစ္စာမဲ့သွားတဲ့ တက္ကသိုလ် ဆ ရာမ တစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကို ပြောပြချင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆရာမရဲ့ မိုက်လုံးကြီးထွားပုံကတော့ သြ ချလောက်အောင် အံ့သြဖို့ကောင်းတာပါ။
ဆရာမရဲ့ တပည့်မလေးပြောပြချက်အရ တစ်နေ့မှာ သူတို့ရဲ့ တက္ကသိုလ်ဆရာမက သူရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို တက်ေ ရာက်ဖို့ သူရဲ့တပည့်များဖြစ်ကြတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူအချို့ကိုလည်း ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အထဲမှာ အခုပြောပြတဲ့ တပည့်မလေးလည်း ဖိတ်ကြားခြင်းခံရပါတယ်။ တပည့်မလေးက နိဗ္ဗာန် ကုန်ရောင်း သူဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ သူ့ဆရာမကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ဖို့အတွက် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူကို မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ဖို့အတွက် ပင့်ေ ဆာင် သွားခဲ့ပါတယ်။ မင်္ဂလာပွဲရောက်တော့ သူမရဲ့ဆရာမရဲ့ အမျိုးသားက တစ်ခြားဘာသာကို ကိုး ကွယ် ယုံကြည်တဲ့ လူမျိုးခြား ဘာသာခြားဖြစ်နေပါတယ်။ တပည့်မလေးလည်း သူ့ဆရာမရဲ့ အဖြစ် သနစ် ကို ကြည့်ပြီး တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့မိပါတယ်။
အရင်က ဆရာမဆိုတဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ အထင်ကြီးလေးစားခဲ့မိတာတွေလည်း အခုတော့ သဲထဲရေသွန်သလို ဖြစ် သွား ခဲ့ရပါတယ်။ ဆရာမကိုယ့်အိုး ကိုယ့်အိမ်နဲ့ဖြစ်တဲ့အခါ အိမ်ဦးခန်းမှာ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ဖို့ မင်္ဂလာ ဦး လက်ဆောင်အဖြစ် ပင့်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ဟာလည်း အခုတော့ ဆရာမအတွက် တန်ဘိုး မရှိဖြစ် သွားခဲ့ရပါတယ်။
ဆရာမဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံး ဆရာမရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆရာ မရဲ့ မင်္ဂလာပွဲဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းအတိုင်း မင်္ဂလာဆောင်တာမျိုး မဟုတ် ဘဲ လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားတွေရဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းအတိုင်း မင်္ဂလာဆောင်တာဆိုတော့ သတို့ သမီးဖြစ် သူ ဆရာမဟာ သတို့သားဖြစ်သူ လူမျိုးခြား ဘာသာခြားရဲ့ ခြေဆေးရေ၊ လက်ဆေးရေကို သောက် လည်းသောက်၊ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကိုလည်း ပက်ဖြန်းခြင်းခံရပါသတဲ့။
ဒီအချိန်မှာ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှိကြတဲ့ ကျောင်းသားအချို့က သူတို့ရဲ့ ဆရာမကိုကြည့်ပြီး အံကြိတ်ခံစား ခဲ့ရ သလို ကျောင်းသူအချို့ကတော့ မျက်ရည်စိုရွှဲ ငိုပွဲတွေ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ တပည့်မလေးလည်း မင်္ဂ လာဆောင်လက်ဖွဲ့အဖြစ် ပင့်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို လက်ဖွဲ့ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်နေကြတဲ့ အမျိုး သမီး ငယ်များကို အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီး ပြန် လည် ပင့်ဆောင်လာခဲ့ ပါတယ်။
နယ်ဘက်က မိတ်ဆွေတစ်ယောက်လည်း သူတို့နယ်ဘက်မှာ မူလတန်းပြ ကျောင်းဆရာမ တစ်ယောက်က လူ မျိုးခြား ဘာသာခြားနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး လူမျိုးခြား ဘာသာခြားဇာတ်ထဲ ဝင်သွားကြောင်းပြောပြ ဖူးပါ တယ်။ ဒီလိုပညာတတ်တဲ့ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ ဆရာမတွေကအစ စည်းကမ်းမရှိ၊ လင်ယူပက်စက် မှုတွေေ ကြာင့် သူတို့ကို မှီပြီး ပညာသင်ယူနေတဲ့ တပည့်သားသမီးတွေအနေနဲ့ မျက်စိလည်လမ်းမှားပြီး အတုလိုက် ကုန်မှာတောင် စိုးရိမ်နေရတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေရပါတယ်။
ဒီအကြောင်းလေးတွေက ဖတ်ကောင်းအောင် တမင်လုပ်ကြံပြီး ရေးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ လောက မှာ မဖြစ်နိုင် ဖူးဘူး။ မဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အရာတွေဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အဟုတ်တကယ်ဖြစ်လာခဲ့အခါ အား လုံး အံ့သြကြ ရပါတယ်။
အခုပြောခဲ့တဲ့ ဆရာမတွေ ဟာ သူတို့ရဲ့ပညာအရည်အချင်းဟာ သူတစ်ပါးတွေအပေါ်မှာ ဆရာ လုပ်နေ တာဆိုတော့ ပေါ့သေးသေးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်နဲ့ အမျိုးဘာသာအပေါ်မှာ သစ္စာမဲ့ မှု ကတော့ မူကြိုအဆင့်ရှိတဲ့ ကလေးကတောင် ရှုတ်ချမှာသေချာ ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းလေးတွေကို တွေး မိရေး မိတိုင်း အမျိုးဘာသာအတွက် တော်တော်လေးကိုပဲ စိမ်မချမ်းမသာဖြစ်ရပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာအမျိုးသမီးလေးတွေ လူမျိုးခြား ဘာသာခြားတွေကို လင်လုပ်နေကြတာကို လည်း အား မလို အားမရ ဖြစ်မိပါတယ်။ အချို့ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာအမျိုးသမီးလေးတွေ ပညာ အလင်းအားကောင်း ကြပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် အချစ်မျက်စိကြတော့ ကန်းနေကြပါတယ်။ မိဘတွေက မိမိတို့ကို ပညာသင်ပေး တယ် ဆို တာ စဉ်းစားတတ်အောင် ချင့်ချိန်တတ်အောင်၊ တွေးတောကြံစည်မှုတွေ မှန်ကန်အောင် ၊ ဆုံးဖြတ် ချက်ေ တွ မှန်ကန်အောင် သင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် ဆရာ၊ ဆရာမဆိုတာ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ ပညာ အလင်းပြကြယ် တာ ရာကြီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြယ်တာရာကြီးတွေဟာ အရောင်မှိန်နေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ အရောင်မှေး မှိန်နေ ရင် သူတို့ကို မှီခိုအားထားလျှောက်လှမ်းနေကြ တဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေမှာလည်း စမ်းတစ် ဝါး ဝါး လမ်းလျှောက်ရ သလိုမျိုး ဖြစ်နေတတ် ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေအနေနဲ့ မိမိကိုယ်ကို စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ထိုက်အောင် အရောင်တွေ လင်း လက်ေ တာက် ပနေဖို့ လိုပါတယ်။ ဘယ်လိုအရောင်မျိုးတွေလည်းဆိုရင် အမျိုးသားရေးနဲ့ပ တ်သတ် လာ ရင် အမျိုးကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်အရောင်တွေ၊ ဒီအရောင်တွေဟာ ဆရာ၊ ဆရာမတွေမှာ အမြဲတမ်း တဖိတ် ဖိတ် တလက်လက်နဲ့ ဖြစ်နေရပါ့မယ်။ ဒါမှ မိမိတို့တပည့်သားသမီးတွေကို အမျိုးကို ဘယ်လို ချစ်ရ မယ်။ ဘာသာကို ဘယ်လိုလေးစားတန်ဖိုးထားရမယ်ဆိုတာ သင်ပြပေးလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမ လုပ် တယ် ဆိုတာ သူတစ်ပါးတွေထက် ပညာတတ်လို့ လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ ပညာ က ကိုယ့်ကိုထမင်းကျွေးမှာပါ။ အငတ်တော့မထားပါဘူး။ မိမိတို့ရဲ့ ပညာအလင်းရောင်နဲ့ မိမိတပည့် သားသမီးလေး များအား အမျိုးဘာသာ သာသနာကိုချစ်တတ် မြတ်နိုးတတ်အောင် အလင်းရောင်ပေးစေ ချင်ပါ တယ်။ သို့မှသာ ဆရာဆိုတဲ့ ဂုဏ်နဲ့ထိုက်တန်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် ဆရာ ဆရာမများအနေနဲ့ မိမိတို့တတ်ထားတဲ့ ပညာလေးကို အမျိုး ဘာသာ သာသနာအရောင် အဝါ လင်းလက်ရအောင် တပည့်သားသမီးများအား ကောင်းမွန်တဲ့ အဆုံးအမလေးတွေ ပေးပြီး အမျိုးချစ် တတ်ေ အာင် ဘာသာမြတ်နိုးတတ်အောင် သာသနာတန်ဖိုးထားတတ်အောင် သင်ကြားပေးဖို့ အထူးပဲ အနူး အညွတ်တောင်း ပန် လိုက်ပါတယ်။
ဖိုးပညော(သပိတ်ကျင်း)၏ ဆောင်းပါးလေးအား ထပ်မံဖြည့်စွက်ရေးသားထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
စာဖတ်သူအားလုံးသက်ရှည်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာပြီး လိုရာဆန္ဒများပြည့်ဝလျက် မိမိအကျိုး သူတစ်ပါး အ ကျိုး လောကအကျိုး သာသနာ့အကျိုးကို ဆထက်တိုးပြီးဆောင်ရွတ်နိုင်ကြပါစေ။
၂၀၁၂ မှာရှာတွေ့တဲ့ မျိုးစိတ်သစ်များ
၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း အသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ မျိုးစိတ်များ။
အမှောင်ထဲမှာ လင်းနိုင်တဲ့ ပိုးဟပ်တစ်ကောင်၊ သမိုင်းခေတ် မတိုင်ခင်က ကျောက်ထွင်းပန်းချီ ဖျက် ဆီးနိုင်တဲ့ အ နက်ရောင်မှို တမျိုးနဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ လက်သည်းခွံထက်တောင်သေးတဲ့ ဖားလေး တစ်ကောင် ဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာတွေ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ မျိုးစိတ်အသစ် စာရင်းရဲ့ ထိပ်ဆုံးက ၁၀ ခုထဲမှာ ပါဝင်ပါ တယ်။ နိုင်ငံတကာ မျိုးခွဲပညာရှင်များ ကော်မတီက သူတို့ရဲ့ နှစ်စဉ် ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေကို ဒီသီတင်း ပတ် အတွင်းမှာပဲ ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
စပိန်လူမျိုး ဇီဝပညာရှင်နဲ့ သတ္တဗေဒသုသေသီတဦးဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ မျိုးခွဲပညာရှင်များ ကော်မတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ Antonio Valdecasas က လူတွေမျှော်လင့်မထားတဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ သက်ရှိသတ္တ၀ါတွေ၊ အင်မတန်ကို ရှားပါးပြီး အရောက်အပေါက် ခက်ခဲလှတဲ့ ၀န်းကျင်တွေမှာရှိတဲ့ သက်ရှိသတ္တ၀ါတွေကို သူတို့ကော်မတီက လိုက်ရှာနေတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ထိပ်တန်း မျိုးစိတ်သစ် ၁၀ ခုကို ခုလို ရွေးချယ်သတ်မှတ်တာဟာ အယ်ရီဇိုးနား တက္ကသိုလ်က (၆) ကြိမ်မြောက် သတ်မှတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်စာရင်းထဲမှာ အင်မတန်သေးငယ်တဲ့ ခရမ်းရောင်ရှိတဲ့ ပန်းတမျိုး၊ စောင်းပုံသဏ္ဍာန် ရှိတဲ့ ရေမြှုပ်တမျိုး၊ lesula မျောက်တမျိုး၊ ခရုစားမွေ နဲ့ မျိုးတုန်းတော့မယ့် Madagascar သစ်တောထဲက ပန်းပွင့်တဲ့ ချုံပုတ်တမျိုးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သစ်ပင်နဲ့ တိရစ္ဆာန် မျိုးစိတ်သစ်ပေါင်း ၁ သောင်း ၈ ထောင်လောက်ကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ရှာဖွေတွေ့ရှိနေပေမဲ့၊ ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ သက်ရှိမျိုးစိတ်ပေါင်း ၁၀ သန်းကနေ ၁၂ သန်းထဲက ၂ သန်းလောက်ကိုပဲ သူတို့က အမည်နာမတပ် ဖော်ထုတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့် အကြောင်းဖြင့်ပဲ ပြပြ အစိုးရကို အတိုက်အခံလုပ်မည့် ဆန္ဒပြပွဲမှန်သမျှ အတွက် ငွေကြေးထောက် ပံ့ ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် အန်အယ်လ်ဒီပါတီမှ ပါဝင်နိုင်ကြောင်း အန်အယ်ဒီ ခွဲထွက် ပါတီ တစ်ခုမှ တာဝန် ရှိသူ တစ်ဦးမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
အန်အယ်ဒီက အရင်တုန်းက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို တစ်ယောက် ၅၀၀၀ နဲ့ တစ်လကို သိန်း ၃၀ လောက် အကုန်ခံပြီး ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်။ တစ်လကို သိန်း ၃၀ ဆိုတဲ့ ငွေတွေဟာ ဘယ်ကရတယ်လို့ ခင်ဗျား ထင်လို့လဲ ဟု ၄င်းမှ ပြောပြခဲ့သည်။
အန်အယ်လ်ဒီပါတီမှ ထောက်ပံ့မှုတွေ လုပ်နေတယ် ဆိုရင် ဘာကြောင့်ဆိုတာလဲ ရှင်းပြ ပါအုံးဟု ဆိုသည့် အခါ တွင်တော့ ကျွန်တော်ကတော့ ပြည်တွင်း ဆူပူမှုတွေ ဖြစ်အောင် အစပျိုးနေတယ်လို့ပဲ ထင်တယ်။ အခြေခံ ဥပဒေ ကို ပြင်ဖို့ ဆိုတာ လွှတ်တော်အတွင်းထက် ပြည်တွင်း ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ပွားအောင် လုပ်ပြီး၊ ကြားဖြတ် ဖွဲ့ရင် သူတို့အတွက် ပိုပြီး အခြေအနေ ကောင်းနိုင်တယ်လေ၊ မကြာခင်ကတောင် ကြားဖြတ်ဖွဲ့မယ် လုပ်လာလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူပြောတာ မဟုတ်ကြောင်း ဖြေရှင်းခဲ့ရသေးတယ်ဟု ပြောခဲ့ သည်။
၄င်းမှ ဆက်လက်ပြီး ၂၂ ရက်နေ့က ထင်ကျော် ဆန္ဒပြတာကို သိလိုက်တယ် မဟုတ်လား။ အဲဒီဆန္ဒပြပွဲမှာ NLD က ထောင်ထွက် ထွန်းထွန်းနိုင်၊ မြောက်ဥက္ကလာက ဦးအုန်းကျော်၊ တောင်ဒဂုံက ဦးစိန်သန်း၊ တင်မောင် ကြည်၊ မချို၊ နောက်ပြီး ထင်ကျော်ရဲ့ မိန်းမ သန်းသန်းမော်၊ အဲဒီ မြို့နယ် NLD ကပဲ ဒုဥက္ကဌ ဦးဆန်နီ၊ ၀င်းဌေး၊ စိန်ကြည် တို့အပါ ၁၅ ယောက်လောက် ရှိတယ်။ တစ်ယောက်က တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒပြ တယ် ဆိုပြီး လုပ်တယ်။ ကျန်တဲ့ ၁၅ ယောက်က ဘေးကနေ ၀ိုင်းအုံပေးထားတယ်။ The Voice လို မီဒီယာမျိုးတွေကို လက်တို့လိုက်ရင် ကင်မရာတွေ တလက်လက်နဲ့ အလုပ်ဖြစ်သွားပြီ။ ခင်ဗျား သတိထားကြည့်လိုက်၊ ဆန္ဒပြ တယ်ဆိုရင် ဒီလူဒီလူတွေပဲ ဖြစ်နေတာကို ကောင်းကောင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်။ အဲဒီလူတွေရဲ့ တစ်ဝက်က NLD က ဖြစ်နေတာကိုလည်း တွေ့ရလိမ့်မယ်။
ဒါ တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒပြတာနော်၊ လူ ၁၀ ယောက်လောက်စုပြီး ဆန္ဒပြတယ် ဆိုရင် နောက်ကွယ်က ဘယ် လောက် ပါမယ် ဆိုတာ မှန်းကြည့်ပေတော့။ ဗီနိုင်းစာရွက်တွေ၊ ထမင်းစားရိတ်တွေ၊ သွားလာ စရိတ်တွေကို ရှင်းဖို့ ပြည်တွင်းမှာ အခြေခိုင်တဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုမက ရှိကို ရှိနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပါတီအနေနဲ့ကတော့ ဒီလို နောက်ကွယ်က တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ စီစဉ်တာတွေကို ကန့်ကွက်ကြောင်း ပြောဖို့ အချက်အလက်တွေ စုဆောင်းထားပါတယ်။ NLD ပါတီနဲ့ ၈၈ လို အဖွဲ့တွေရဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို မြင်နိုင်အောင် သတိပေးတာပါ။ ဟု ၄င်းက ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
ကံသီ၍ အသက်မပျက်ခဲ့ရသည့် ဒေ၀ူးကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ
Posted by drmyochit Saturday, May 25, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | 1 comment
မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဖက် ရခိုင်ကမ်းလွန်ဒေသများတွင် ရေနံတွင်းတူးစင်များရှိရာဒေ၀ူး ကုမ္ပဏီ၏ရေနံ တွင်းတူး စင်တွင် ကိုရီးယား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ မြန်မာနှင့် အခြားနိုင်ငံသားများတာဝန်ထမ်း ဆောင်နေကြသည်။
မေ ၁၆ ရက်နေ့ တိုက်ခတ် မည့်မဟာစင်မုန်တိုင်းသတင်းကို ကုမ္ပဏီက မေ (၁၁) ရက်နေ့က တည်းက သတင်း ရရှိခဲ့သောလည်း ၀န်ထမ်းများကို ရွှေ့ပြောင်းပေးမှု အားနည်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အစီအစဉ်အရ မေ ၁၄ တွင် ပထမအသုတ် မေ ၁၅ တွင် ဒုတိယအသုတ်ရွှေပြောင်းပေးရ မည်ဖြစ်ရာ မေ ၁၄ ရက်နေ့ အစီအစဉ်ပျက်ပြီး မေ ၁၅ ရက် နေ့ နံနက် ၉ နာရီမှသာ ၀န်ထမ်း အချို့အားရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင် ခဲ့ သည်။ ရွှေ့ပြောင်းရေးအစီအစဉ် သည်တစ်ဖက်တစ်ပျက်နှင့် ရပ်တန် ခဲ့သည်။ ရေနံတွင်း တူစင်ပေါ်တွင် မြန်မာ့ရေ နံနှင့် သဘာဝဓတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းမှဝန်ထမ်းအချို့မြန်မာ နိုင်ငံသားဒေ၀ူးကုမ္ပဏီမှသင်တန်း သားဝန် ထမ်းများနှင့် အခြားနိုင်ငံ သားဝန်ထမ်းများကျန်ရစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြောင်းရွှေ့ခံရသောဝန်ထမ်း အချို့ကိုလည်း စစ်တွေတွင်ချန် ထားခဲ့ပြီး ရန်ကုန်သို့ကိုရီးယားနိုင်ငံ သားဝန်ထမ်းများသာပြောင်းရွှေ့ ပေးခဲ့ကြောင်း ကံကောင်းထောင့် မ၍တါင်း တူစင်တွင်ကျန်ခဲ့သော ၀န်ထမ်းများ အသက်အန္တရာယ် မဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ၀န်ထမ်းများဘေး ကင်းလုံခြုံရေးပေါ်တွင် ကုမ္ပဏီ ၏တာဝန်ယူမှုအားနည်းကြောင်း မုန်တိုင်းကာလအတွင်း တွင်းတူ စင်ပေါ်တွင်ကျန်ခဲ့သော ၀န်ထမ်း အင်အားမှာ ၅၉ ဦးရှိကြောင်း အင်တာနက်သတင်းစာမျက်နှာ ပေါ်တွင်ပါရှိခဲ့သည်။
ပါကစ္စတန်လေယာဉ်ပေါ်ပါ လူနှစ်ယောက် ဗြိတိန်ဖမ်းဆီး
Posted by drmyochit Saturday, May 25, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့နားက လေဆိပ်တခုကို လမ်းကြောင်းလွှဲ ဆင်းသက်ခဲ့ရတဲ့ ပါကစ္စတန် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေကြောင်းပိုင် လေယာဉ်တစင်းပေါ်မှာ ပါလာတဲ့ လူ ၂ ယောက်ကို ဗြိတိန်ရဲတွေက ဖမ်းဆီး လိုက်ပါ တယ်။ Lahore မြို့ကနေ Manchester မြို့ဆီကို သွားတဲ့လေယာဉ်ကို တော်ဝင်လေတပ် တိုက်လေ ယာဉ်တွေ က ကြားဖြတ်တားဆီးပြီး၊ Stansted လေဆိပ်ကို ဆင်းသက်စေခဲ့ပါတယ်။
တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ အပြောအရ လူ ၂ ယောက်ဟာ လေယာဉ်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ သံယသ ရှိမှုနဲ့ လေယာဉ်ဆိုက်ရောက် ချိန်မှာ သူတို့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
လန်ဒန်မြို့ရပ်ကွက်တခုရဲ့ လမ်းပေါ်မှာ ဗြိတိန် စစ်သားတယောက် ဓားနဲ့ခုတ်သတ်ခံ ရမှုဖြစ်ပြီး ရက်ပိုင်း အကြာမှာပဲ ခုလို ဗြိတိန်ဆီလာတဲ့ လေယာဉ်ပျံပေါ် မှာ ပြဿနာဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဓား ခုတ်သတ် မှုဟာ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ဗြိတိန်အစိုးရက ပြောပါတယ်။
မြန်မာနယ် အနီးတွင် တည်ရှိသော ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ ရာမူး (ပန်းဝါ) မြို့နယ်တွင် နယ်ခြားစောင့် ဘီဂျီဘီ တပ်ရင်း တစ်ခုကို တိုးချလိုက်သည်ဟု သိရသည်။
ယခု တိုးချဲ့ချလိုက်သော ဘီဂျီဘီ တပ်ရင်းမှာ အမှတ် (၅၀) ဖြစ်ပြီး မေလ ၂၂ ရက်နေ့က တပ်ရင်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ဘီဂျီဘီ အကြီးအကဲ တပ်မှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် အာဇစ် အာမတ်က တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
တပ်ရင်း၏ အခြေစိုက်ရာ နေရာမှာ ရာမူးမြို့နယ် ရာဇကူ ဧရိယာတွင် ဖြစ်သည်။
ယခုကဲ့သို့ တိုးချဲ့ ချလိုက်သဖြင့် မောင်တောမြို့နယ် တစ်ခုတည်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နယ် စပ် တလျှောက်တွင် နယ်ခြားစောင့် Border Guard Bangladesh တပ်ရင်း (၄) ခုရှိသွားပြီ ဖြစ်သည်။
၎င်းတပ်ရင်းများမှာ တက်နက်မြို့တွင် အမှတ် ၄၂ တပ်ရင်း၊ ကော့စ်ဘဇားမြို့တွင် အမှတ် ၁၇၊ နတ်ကျောက် ဆရီမြို့နယ်တွင် အမှတ် ၃၁ တပ်ရင်း နှင့် ယခု အမှတ် ၅၀ တပ်ရင်းတို့ ဖြစ်ကြသည်။
တပ်ရင်း တိုးချရခြင်းသည် မူးယစ်ဆေးဝါး၊ လက်နက် မှောင်ခိုနှင့် လူကုန်ကူမူ၊ နယ်စပ် ဖြတ်ကျော် ၀င်ထွက် သွား လာနေသော လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များကို နှိမ်နှင်းရန် အတွက် ရည်ရွယ်သည်ဟု ဘီဂျီဘီ အာဏာပိုင် များက ဆိုသည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံ ဒက္ကားမြို့တော်တွင် လက်နက် အရောင်းအ၀ယ် လုပ်သော မှောင်ခိုဂိုဏ်း တစ်ခုကို လက်နက်များနှင့် အတူ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အထူး ရဲထောက်လှမ်းရေး တပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။
ကြာသပတေးနေ့ ညဉ့်အချိန်တွင် ဒက္ကားမြို့ မီပူရ်မြို့နယ် နှင့် မူဟာမတ်ပူရ် မြို့နယ်တို့မှ နေရာ (၂) ခုကို စီးနှင်း ရှာဖွေမူ ပြုလုပ်စဉ် အတွင်း အဆိုပါ လက်နက် မှောင်ခိုဂိုဏ်းကို ဖမ်းဆီးရမိခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူများမှာ စုစုပေါင်း (၇) ဦး ဖြစ်ပြီး ထိုအထဲတွင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံမှ အသက် (၁၉) နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီး တစ်ဦးလည်း ပါဝင်သည်။
ဖမ်းဆီးရမိသည့် လက်နက် ခဲယမ်းမီးကျောက်များထဲတွင် ပစ္စတို (၅) လက်၊ ခြောက်လုံးပူး (၁) လက်၊ ကျည်ဆံ ၂၈ တောင့်နှင့် ယာဘားဆေးပြား ၂၀၀တို့ ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ လက်နက်များကို အဓိက ၀ယ်ယူသူများမှာ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး ပါတီ ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ကြပြီး နောက်လာမည့် ရွှေးကောက်ပွဲတွင် ဥပဒေနှင့် မညီသည့် လုပ်ငန်းများကို ဖန်တီးရန် အတွက် ၀ယ်ယူကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရဲက ပြောသည်ဟု ဆိုသည်။
သို့သော်လည်း သီးခြား အတည်မပြုနိုင်ကြောင်း The Daily Star သတင်းစာက ဆိုသည်။
ဘူးသီးတောင်တွင် အသက် ၁၂ နှစ်ရွယ် မိန်းခလေး တစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေ
Posted by drmyochit Saturday, May 25, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မြို့တွင် အသက် (၁၂) နှစ်အရွယ် အမျိုးငယ် တစ်ဦး မေလ ၁၈ ရက်နေ့က စတင် ပျောက်ဆုံးသွားပြီး ယခု အချိန်ထိ ရှာဖွေ မတွေ့ရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
“ ပျောက်တာက ဒီလ ၁၈ ရက်နေ့က နံနက် ၁၀ နာရီခန့်မှာပါ။ သူအမေနေအိမ်ကနေ အဖွားအိမ်ကို သွားတဲ့ လမ်းမှာ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဘူးသီးတောင် ဒေသခံ ကိုသန်းနိုင်က ပြောသည်။
ဘူးသီးတောင်မြို့ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်မှ မမေဖြိုးဝင်းသည် မေလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ဘူးသီးတောင် ဈေးထဲတွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ရောင်းနေသော မိခင်ဖြစ်သူအား တိုင်ကြားပြီး အဖွားရှိရာ အိုးတောင်စု ရပ်ကွက်သို့ သွားမည်ဟု ခွင့်တောင်းကာ နံနက် ၁၀ နာရီခန့်တွင် ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
မိခင် ဖြစ်သူမှ အဖွားဖြစ်သူထံသို့ ရောက်ရှိသွားပြီဟု ယူဆ၍ အေးအေးဆေးဆေး နေထိုင်နေပြီး ၂ ရက်ခန့် အကြာတွင် ဆက်သွယ်ရာ မမေဖြိုးဝင်းမှာ အဖွားဖြစ်သူထံ ရောက်ရှိခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
မိခင်ဖြစ်သူမှ မမေဖြိုးဝင်းပျောက်ဆုံးနေခြင်းကို သိရပြီးနောက် တစ်ခြားနေရာများသို့ သွားရောက် လိုက်လံ ရှာဖွေသော်လည်း မတွေ့ရှိဘဲ ပျောက်ဆုံးနေသဖြင့် ယခုလ ၂၁ ရက်နေ့က ဘူးသီးတောင်မြို့ ရဲစခန်သို့ သွားရောက် တိုင်ကြားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
“ ရဲစခန်းကို သွားရောက်တိုင်ကြားတာက မေလ ၂၁ ရက်နေ့မှာပါ။ ရဲအဖွဲ့ကတော့ လိုက်လံ ရှာဖွေ စိစစ်မူတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်။ သဲလွန်စတွေတော့ မရသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပျောက်ဆုံးမူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို ဖြစ်တယ်ဆိုတာ တိတိကျကျ မပြောနိုင်သေးဘူး” ဟု ကိုသန်းနိုင်က ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါ လူပျောက်မူနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဘူးသီးတောင် ရဲစခန်းသို့ ဖုံးဖြင့် ဆက်သွယ်ရာ အဆက်အသွယ် မရရှိခဲ့ပါ။
"ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာမိန်းခလေးများ မမှားသင့်တာလေးတွေ မမှ...
“တပည့်တို့ မျက်ရည်နဲ့ ခြေဆေးတဲ့ဆရာမ” (ဖြစ်ရပ်မှန်)...
မြန်မာနယ်စပ် အနီးတွင် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ နယ်ခြားစောင့်တ...
ဘူးသီးတောင်တွင် အသက် ၁၂ နှစ်ရွယ် မိန်းခလေး တစ်ဦးေ...